Banaanbaxii Pegida iyo aragtida muslimiinta Malmö - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Banaanbaxii Pegida iyo aragtida muslimiinta Malmö
Mubrak Cabdirahman: waa cabsi cusub
La daabacay tisdag 10 februari 2015 kl 13.06
Magaalada Malmö xalay waxaa ka dhacay mudaharaad looga soo horjeeday dhaqdhaqaaqa islam diidka ah ee Pegida, kuwaas oo banaanbax ay uga soo horjeedeen islamka ka dhigay magaalada. Laakiin 40 qof ayaa ka soo qaybgalay banaan baxooda halka dad kor u dhaafaya 5 000 oo qof mudaharad kalo horyimaadee kooxdan.
Mubrak Cabdirahman waxuu ka mid yahay siyaasiinta golaha degmada magaalada Malmö. Mubrak ayaa ku tilmaamay banaan baxa Pegida ay ku dhigtay barxadda Malmö cabsi cusub oo la soo gudboonaatay muslimiinta magaaladas, inkastoo aysan aheyn markii ugu horeysey oo koox islam diid ah magaaladas ku qabato banaanbax looga soo horjeedo islamka.
- In magaalada bartamaheeda loogu qabto mudahraad oo si cad loo tuso dadka muslimka ah naceybka loo qabo waa arrin runtii dad badan cabsi gelineysa.
kooxda Pegida ayaa ah koox ka soo aas'aasantay gobol ka mid ah dalka Jarmalka. Dhawaanahaan ayey Pegida ka dhigtay magaalooyin ka mid ah Jarmalka mudaharaadyo kumaan kun ka soo qaybageleen oo islamka lagu diidan yahay. Pegida ayaa u soo faaftay waqooyiga Yurub, sida dalka Norwey oo ay mudahraadyo islamka lagu diidanyahay ka dhigeen iyo weliba dalka Danmark. kooxda ayaa shalay mudaharaadkii ugu horeeyey isku deydey in ay ka dhigaan magaalada Malmö laakiin waxaa aad u hooseeyey tirada ka soo qayb gashay, halka 5 000 oo ka soo horjeeda Pegida ay mudahraad kalo horymaadeen kooxda.
Laakiin Mubrak ayaa qaba in taa micnaheeda aheyn in kooxdan joojinayso banaanbaxyadooda islam diidka ah, balse laga yaababa in ay sii xoogeystaan.
- Waa arrin lagu farxo in dad badan soo baxaan maalin isniin ah oo ah maalin shaqo si ay u tuseeyaan in aan rururada noocan laga jacleyn halkan. Laakiinse in ururada noocan ah ay ka sameysmaan waddan Sweden oo kale ah oo aqoontiiisa kor tahay, dhaqaalahooda fiican yahay oo waddan horumarsan ah in ay soo bataan ururada noocan waa wax runtii cabsasho leh.
Pegida oo guuldaro kalo kulantay Sweden